"ICampos de Castilla", umsebenzi wobugcisa ka-Antonio Machado | Uncwadi lwangoku
"Campos de Castilla" Ngoyena msebenzi waziwa kakhulu wembongi yaseSevillian eqaqambileyo u-Antonio Machado kwaye wapapashwa ngo-1912, nangona waphinda wandiswa kwiminyaka emihlanu kamva, ngo-1917. Kula msebenzi imifanekiso iyinyani kwaye ayifani ncam kunakwincwadi ezingaphambili Umbhali kunye nembonakalo yomhlaba zithetha lukhulu ngombhali ngokwakhe, uhlanga loluntu ngokubanzi kunye nembali yaseSpain.
Ngapha koko, inkqubela yelizwe Kuvakala ukuba kwinkcazo yombhali yokucamngca ngezinye zeendawo okanye isimilo sabanye abantu. Iimfihlelo zobomi okanye iimvakalelo zonqulo zezinye imixholo kwincwadi enzulu apho uMachado atyhila khona ngokupheleleyo umphefumlo wakhe ukuveza yonke into emxhalabisayo okanye emtshutshisayo ngendlela ecacileyo.
Ukufa kwesithandwa sakhe ULeonor ivakala kwimibongo esixhenxe eyenza le ncwadi. Ukongeza, enye into kunye nembono zivelisa ii-puns ezintle kunye nezobuchule ezimelwe ikakhulu kwi "Imizekeliso." "Imizekeliso neengoma" zisondele ngokusesikweni kwifilosofi yaseMpuma ngokubhekisele kubufutshane kunye nothando, ngamanye amaxesha olukhumbuza imibongo yaseJapan okanye yamaTshayina.
Kwakhona kule ncwadi kukho ukuthandana ebanzi ekuthiwa "Umhlaba waseAlvargonzález", yembali yendalo ekuboniswa kuyo iintlungu zomntu, kwibali apho amabhongo kunye nokubawa kungabuqondi ubuzalwana.
Okokugqibela siza kuthi ukongeza kwiindlela, imilambo kunye nolwandle zizinto ezimbini eziphambili iisimboli Umsebenzi, ububomi bemilambo kunye neelwandle ezifanayo nento engenasiphelo kwaye engenamda koko abanye abagxeki bakholelwa kuko ukubona umfanekiso kaThixo.
1 Indawo yeCampos de Castilla
2 Ubhala njani u-Antonio Machado Campos de Castilla
3 Abalinganiswa baseCampos de Castilla
4 Yintoni umbhali afuna ukuyidlulisa njengesiphelo?
5 Kutheni kufuneka ufunde iCampos de Castilla
Indawo yeCampos de Castilla
Imeko yomsebenzi weCampos de Castilla wenzeka eCastilla, ngakumbi kwilali, eVinuesa nase Muedra, kufutshane neCidones. Ngapha koko, kukho izixeko ezininzi ezikhankanyiweyo, ngakumbi ngumninawa omncinci ongulowo ulihambileyo ihlabathi kwaye wabuyela ekhaya kwakhona. Ixesha elichanekileyo ebalini lenzeka ngalo alaziwa, kodwa lisinika indawo yembali apho lihlala khona isekwe kukungeniswa, amasiko kunye nobomi obulondolozayo. Kuye, imbeko nembeko zimbini iimvakalelo ezibaluleke kakhulu ezichaza abantu.
Ukongeza, umbhali ucebisa ukuba isenzo samadoda sinokuchaphazeleka zizimvo okanye incoko nabafazi babo, kungoko ukuthandabuza ukuba ngubani kanye kanye owayenombono wokuphelisa utata wosapho.
Kuyo yonke imbali, isiganeko esenzekileyo ngandlela thile siguqula abalinganiswa kumdlalo, babumba indlela yabo yobomi kwaye bahlengahlengise kwinto abayenzileyo.
Ubhala njani u-Antonio Machado Campos de Castilla
I-Campos de Castilla ibhaliwe kumntu wesithathu. Unombalisi oyena mntu uxela ibali ngaphandle kokunika uluvo okanye uluvo malunga nokwenzekayo, nangona xa oko akubhalayo kuhlolisiswa, uvakalisa oko uziva ngendlela efihliweyo.
Izivakalisi zimfutshane kwaye zinenkcubeko enkulu. Ngaphandle kwenkcazo, yonke enye into ifuna ukuthetha kakhulu ngamagama ambalwa. Kungenxa yokuba ngumsebenzi kwivesi, ke kuye kwafuneka ukuba ilawulwe ziimetric zothando.
Ekuqaleni, iyelenqe lebali liyamangalisa kwaye liyakhawuleza, kodwa umbhali ukwenze oko ukufika ngqo ekubulaweni, ukusukela apho, wonke umsebenzi ujolise kolo kubulala kunye neziphumo ezinazo kubalinganiswa.
Ngokubhekisele kulo msebenzi, wahlulwe waba ngamacandelo ali-10, ngalinye linesihloko ngendlela esebenza njengesiqalo sokuxela into eza kubaliswa nganye nganye.
Abalinganiswa baseCampos de Castilla
Umsebenzi we U-Antonio Machado Imfutshane, nangona kunjalo, loo nto ayikuthinteli ukuba kukho oonobumba abaliqela abaphawuleka kwaye kufanelekile ukwazi, kungekuphela kwinqanaba lomzimba (into engachazi kakhulu), kodwa ngakumbi ngaphakathi, ukwazi ukuba yintoni ihamba nganye yazo.
Ke, phakathi kwabo kukho:
Ngokungathandabuzekiyo ophambili wenxalenye yokuqala yomsebenzi, kunye noyise wabalinganiswa. Ayithethi ukuba ivela kuphela kwelokuqala, kodwa ikwabonakala nakwinxalenye yesibini, kodwa ngokwasemoyeni okanye nangomoya.
Ubuntu obunikwa ngumbhali kuAlvargonzález bobu Indoda efuna ukwenza konke okusemandleni ukuze usapho lwayo luphile ungasweli nto. Kuye, usapho yeyona nto ibalulekileyo. Ukongeza, sithetha ngomntu othembekileyo kwaye uthandana neyakhe.
Umfazi ka-Alvargonzález akanayo indima ebalulekileyo eCampos de Catilla, kodwa ukwindawo yesibini. Ukongeza, njengoko ibali liqhubeka, nangona libonwa ngamaxesha ahlukeneyo, inyani kukuba umbhali ulongeza ku Kubuhlungu kukusweleka kwendoda yakhe ebuleweyo.
Ewe kunjalo, oku kunokubonwa nangenye indlela, kuba ukuba phambi kokuba sathi u-Alvargonzález wayeyindoda eyanikela yonke into kusapho lwayo, kwaye yayisemathandweni, into yokuba inkosikazi yakhe ilahlekile inokutolikwa njengokuba ilahlekile Intsingiselo yakhe yobomi, kumntu amthandayo kwaye emthanda kakhulu, ongaziyo ukuba ungaqhubeka njani ngaphandle kwakhe.
UJuan ngunyana omkhulu, izibulo. Kodwa kwakhona omnye wababulali bakayise. Ngaphandle kothando olunikwe kuye, umbhali sele emele umlinganiswa ongenawo umbono wokuqala kuye. Uthetha ngaye ngokumchaza ngebhulukhwe elinamahlahla kunye nokuziphatha okuncinci.
Ukutyhubela imbali, lo mlinganiswa uphethwe kabuhlungu, ngandlela thile u-Antonio Machado wamkhokelela kwilizwi elithi "nabani na owenzayo, uyalihlawula."
Ungunyana wesibini ka-Alvargonzález, kunye nomnye wababulali bakayise. Kwakhona, uMachado ubonakalisa umlinganiswa "ombi" ongenalo uvelwano naye kodwa urhanela. Ngamehlo anqabileyo kunye nokuziphatha okungathandabuzekiyo, inesiphelo esifanayo nesangaphambili.
UMiguel ngunyana omncinci wosapho. Kude kube lelo xesha, ebengahlali nabo kodwa, emva kwengxoxo ngekamva lakhe, kuba ebengafuni ukuba yimonki, wemka ekhaya. Xa ebuya, izinto ziqala ukusebenza.
Kulo msebenzi, nako Abafazi babantwana banokubaluleka okuthileKodwa zizincedisi ezinobuntu obufanayo njengabayeni babo. Ngapha koko, umbhali akabaniki lizwi okanye bavote.
Yintoni umbhali afuna ukuyidlulisa njengesiphelo?
ICampos de Castilla ayisiwo nje umdlalo apho kuxelwa ukubulala. Ithetha ngebali elineziko lokubulala, kodwa ikwakhona ubulungisa bukaThixo, Oko kukuthi, ukuba umntu wenza isenzo esibi, kungekudala okanye kamva kuya kubakho isohlwayo ngenxa yaso.
Ke, sinokuthi uCampos de Castilla ngumzekelo webinzana eliqhelekileyo «ngubani owenzayo, ohlawulekayo», apho emva kokubulala, ababulali ngokwabo baphela bethatha amayeza abo kuba bengafezekisi oko bebekufuna ekuqaleni.
Nangona kunjalo, uMachado akajongi nje kulo mbandela, kodwa ukwathetha nangabanye, ngendlela egqunyiweyo ngakumbi, efana "nokugula kothando" kwicala likamama othi, emva kokuswelekelwa ngumyeni, abe lusizi; okanye umona nomona kwicala labantwana elixhokonxa ukubulawa kukatata.
Nokuba ekugqibeleni, umbhali Thetha ngokuzisola ngento abayenzileyo.
Kutheni kufuneka ufunde iCampos de Castilla
ICampos de Castilla yincwadi ethi izame Chaza ukuba naluphi na uhlobo lwesenzo, esilungileyo okanye esibi, luneziphumo. Olona qhankqalazo ngaphandle kwamathandabuzo ngaphandle kwamathandabuzo kukubulawa kukatata ezandleni zabantwana bakhe, kwaye indlela aba "babulawa ngayo" ekugqibeleni "ngumthetho wobuthixo."
Nangona kunjalo, iya kuqatshelwa ukuba itshintsha njani ibali lonyana omncinci. Ushiya ikhaya kuba efuna ukulandela intliziyo yakhe kwaye utata wakhe ugqiba kwelokuba amnike ilifa lakhe ukwenza nantoni na ayifunayo. Yiyo loo nto, esiya kubona umhlaba kwaye abuye, hayi ihlwempu, kodwa onwabile kwaye etyebisiwe ngokwenkcubeko kunye nolonwabo. Ke ngoko, nazo ezo zenzo zilungileyo, zinomvuzo wazo encwadini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Uhlalutyo lwe «Campos de Castilla»
USharly josari sitsho
Kubonakala kum ukuba kufanele ukuba nobunzulu obuncinci ngokubhekisele kuhlalutyo lwengqokelela yemibongo eshenxa ngokupheleleyo kwi-Modernism ukwenza indlela yesiZukulwana sika -98 ngolwimi olulula nokusombulula iingxaki ebusweni be-DECADENCE OF SPEYIN
Phendula uSharly Josari
Isishwankathelo esifutshane se "Imbali yezinyuko" ngu-Antonio Buero Vallejo
5 ukukhutshwa koncwadi olucwangciselwe uMeyi